2008 နောက်ဆုံးည | Layma's World
« လမ်းဖောက်တဲ့အခါ ကျွန်မမှာ… ရှိတယ်… »
mtj, on January 9, 2009 at 7:55 pm said:
မိန်းကလေးအများစုရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုက အရမ်းကို ဟော့ပြီး.. အရမ်းကို ရှော့ … ပါတယ်…။ အင်းးး…….. 😛
မီးမီးငယ်, on January 9, 2009 at 8:25 pm said:
အကို သင်္ကြန်ကပြောလို့အရမ်းစာရေးကောင်းတယ်တဲ့။ ပထမဆုံးအကြိမ် လာလည်ဖြစ်ပါတယ်
သားကြွက်, on January 9, 2009 at 8:43 pm said:
နေရာ ချင်းသာ လဲလိုက်ချင်တယ်… လို့  မတွေးပါဘူး လူကိုများ ဘယ်လို အစားထဲက မှတ်နေလို့တုန်းး ဟွန်း အရှက်နဲ့ လူလုပ်တာဟုတ်ဘူး အသက်နဲ့ လူလုပ်တာ စားရရင်ပြီးကော ပြောမလို့ပါ အော် အော် သူတို့များကျတော့ နယူးရီးယားညမှာ စုံတွဲခုတ်နေကြတာကိုးးးး 😛 ရေးပေးတာ ကျေးဇူးမတင်တော့ဘူးနော့် ပြောနေမယ့်သူတွေမှမဟုတ်တာ ကိုက်တော့ဘူးနော့် 🙂
ညိမ်းညို, on January 9, 2009 at 8:54 pm said:
ကိုကောင်းကင်ကြီးကို စိတ်မချလို့ လိုက်သွားတဲ့အစ်မကြီး
မွန်, on January 10, 2009 at 4:31 am said:
ဘောင်းဘီလက်ရှည်ကြီးနဲ့ လျှော့စားနေမှာ မြင်ယောင်နေတယ်နော် (ခါးပတ် ဟိ)
sin dan lar, on January 10, 2009 at 12:10 pm said:
MhawSayar, on January 10, 2009 at 4:54 pm said:
မြန်မာမိန်းကလေးတွေ “ဟော့” ပြီး “ရှော့” တာကတော့ အင်္ဂလိပ်လို Happy New Year တင်က မကဘူးဗျ. ဗမာလို Happy New Year ရင် အရမ်းပူလို့ ပိုပြီးတောင် ဟော့ပြီး ရှော့ ကြသေး တယ်ထင်တာပဲ 😛
ကျွန်တော် ထင်တာတော့ နွေရာသီ နှစ်သစ်ကူး နဲ့ ဆောင်းရာသီ နှစ်သစ်ကူး ကြားမှာ တစ်ကယ့်ကို ခြားနားချက် ရှိပုံမရဘူးဗျ.
(တစ်ရက်ကနေ တစ်ရက်ပြောင်းတာရယ်၊ သက္ကရာဇ်တွေ ပြောင်းပြောင်း သွားတာရယ် ကို ပြောပါတယ်ဗျာ. :D)
နေ့အိပ်မက်, on January 11, 2009 at 12:18 am said:
အန်း.. မမ၂၀၀၈ကြီးက ဗိုက်ဝတဲ့၂၀၀၈ဖစ်တွားတာပေါ့… နာလိုဝူး… 😛 😛 😛
nhn, on January 11, 2009 at 6:33 am said:
THS, on January 11, 2009 at 7:44 am said:
ဘူဖေးဆွဲရတာတော့ တန်တယ်ဗျာ အစ်မ၊ အလကားတိုက်တဲ့ ဘီယာပဲ မြည်းကြည့်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး 😛 😛
nu-san, on January 11, 2009 at 8:36 pm said:
အွန်လိုင်းက သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ပိုစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ အဟီး.. ဂလု ဂလုနဲ့ စာဖတ်ပြီးပဲ သွားရည်သုတ်တော့မယ် လေးမရေ… 😀
အင်း မြန်မာမလေးတွေလည်း အရမ်းဟော့ အရမ်းရှော့ကြတယ် ဆိုလို့ ကိုယ်ကပဲ ခေတ်ကို မျက်ခြေပြတ်သွားတာလား သူတို့ကိုကပဲ ခေတ်မီလွန်းနေတာလား မပြောတတ်တော့ဘူး… 😦
SoeMoe, on January 12, 2009 at 11:28 am said:
ဝေလေး, on January 12, 2009 at 9:52 pm said:
ဝိုး. ပျော်စရာကြီးနော်…. စားစရာတွေများကြီးပဲ….
ShwunMi, on January 12, 2009 at 10:24 pm said:
များများစားခဲ့သလို များများစဉ်းစားခဲ့တဲ့ မလေးမ ..
များများ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ.. 🙂
နေရာချင်း မလဲချင်ပါ.. ဘီယာမကြိုက်.. ဟော့ရှော့ကောင်မလေးတွေ မကြိုက်.. နားအူနေမှာ..
ဂဏန်းတစ်ခု ရုတ်တရက် ပြောင်းသွားတာကိုတော့ အံ့သြနေတုန်းပဲ.. ဘာလို့ပြောင်းကုန်လဲ မသိဘူးနော်.. ;-P